Metoo silikoon Light PJS-PY002W - Shiinaha xeebaha geeska Afrika PJS Technology
Metoo silikoon Light PJS-PY002W
√.Healthy iyo wax aan dhib lahayn, LED Baby Kids Night Light Me toorabbit by silicone ABS siinayaa taabasho ulana jilicsan, Dareen jilicsan. Toddoba midabo kala beddeli kartaa si ay u sameeyaan color.Through ah si tartiib tartiib ah beddelo dusha silicone jilicsan, nuurka u muuqataa jilicsan iyo diiran.
Time √.Long wehel: dhisay-in 500mAH batari lithium taageertaa isticmaalo qaadi karo ilaa, iftiinka huruud diiran iftiiminaya ku saabsan 3 ilaa 5 saacadood. In saaxiibkaa joogto ah habeenkii oo dhan dheer, Abuur atmosphere.Cozy habeenkii carruurta nuurka raaxo leh oo lagu nasto oo dejiyo kids aad u seexdaan sidoo.
induction √.Sensitive: LED Baby Xannaanada Siraaj dhisay-in cusub birqaya chip shidma, fur biiro awood salka, shot ugu horeeya nuurka diiran cad (iftiinka daciif ah), garaaca labaad waa lix midab hab midab-beddelo, saddexaad garaaca had iyo jeer waa dhalaalaya, nuurka ayaa markii afaraad Dami, mar taataabasho, laambad hab ku yimaadaan.
hawlgalka √.Correct: Mid ka mid ah lacag dhan (5V / 1A) qaadataa 2 saacadood. Marka amraya, tilmaanta cas, nalalka kor ku amraya Gabagabeysey, cagaar khafiif ah tilmaame.
seenyo √.Usage: Baby Xannaanada LED ilayska waxaa loo isticmaali karaa sida nuurar habeenkii carruurta qol, laakiin sidoo kale awoodo sida nuurka oo sariirta lagu xannaaneeyo, iyo laambadahoodii yaryaraa toy ilmaha, kids qol decoration.Powered by kasta oo qalabka la dekedda USB, sida aad computer, desktop , laptop, bangi awood.
EXW Price: US $ 6.77- $ 7.22 / gogo '
item Name Metoo silikoon Light
danab DC 5V / 1A
Battery Type Dhisay-in 500mAh Li-ra'iyi batari
Color iftiiminta RGB
Power sahayda batari lithium
faaiidaysta waqtiga 2 saacadood
Time Working 8-20 saacadood (ku xiran tahay Nuurkii)
imtixaanka Standard CE RoHS imanaysa TUV ETL
function 1.7 Color Beddelidda
3. Control Remote
Baako 1pcs / sanduuqa, 48pcs / kartoonka
Gift Perfect Maalinta Jacaylka / Christmas / Year New for lover, saaxiib, waalidiinta, kids
Body Waxyaabaha ABS + Security silikoon
Qorid (haddii ay u baahan) Laser Daabacaadda (1000PCS), shahaadada RoHS
USB cable xukun Haa
Miisaanka Net (kg) 0,22
Shipping Culayska (kg) 0.5
sanduuqa Color (mm) 105 * 115 * 135
sanduuqa kartoonka (cm) 59 * 49 * 30 (16.5kg / Ctn)
Previous: Eey Dog Night Light PJS-PN
Next: Micro Plant Muuqaal habeenkii iftiin PJS-TW-L18
Dabiiciga Crystal Salt Siraaj PJS-M2W
Shito isduldulsaaran shumac PJS-L003
Codsiga sensor Night Light PJS-UFO